Yevacheche yekurara puzzle pasi mwana anokambaira bonde gobvu kusona mat tatami isiri-inotsvedza pasi mateti mutambo bonde
1. Kusanzwika kwemhepo, kuvhunduka, kudzivirira mvura uye kuchengetedza kupisa;
2. Iyo yekuisa iri nyore, inotsvedzerera, uye iyo yepamusoro ine yakatarisana ne-anti-slip zvivakwa; ukobvu i1CM;
3. Chigadzirwa hachina kunakirwa uye chinogona kushandiswa pasina kuwacha uye kutonhora; kunyanya kuvacheche kuti vashandise nerunyararo rwepfungwa;
4. Ukobvu hwechigadzirwa chakasvibira chinotadzisa mwana kudonha nekukuvara paakagara pairi achitamba. Inogona zvakare kushandiswa sejimnastics mat mumba, iri nyore kuchengetedza.
1. Ndokumbira uturure pasuru usati washandisa woiisa munzvimbo ine mhepo kwenguva yakati kuti kuti ubvise zvakazara hwema hunenge hwasara.
2. Mushure mekusanganisa meno maererano nemazino nemazino, chero musanganiswa wekugadzira unogona kuitwa (mativi mana ane mazino emuromo ekubatana. Kuiswa kuri nyore uye kwakatsetseka)
3. Kune vana vari pasi pemakore matatu ekuberekwa, ndokumbirawo muishandise pamwe nekambani yemunhu mukuru.
4. Kana uchida kuchenesa, ndapota pukuta netowel yakanyorova, yekutsuka, uye geza nemvura
★ Ine zvakasiyana siyana zvinoshandiswa. Inogona kushandiswa sechinhu chevana toyi kana sechishongo. Hainakidze uye inogona kushandiswa pasina kuwacha uye kutonhora; inovimbiswa zvakanyanya; inonyanya kunaka.
★ Kudzivirira mwana kudonha nekukuvara paakagara pairi achitamba. Inogona zvakare kushandiswa sejimnastics mat mumba, iri nyore kuchengetedza.
★ Ukachiwaridza pasi, haunzwi kutonhora kuri pasi. Inogona kushandiswa sekapeti kana semubhedha wenguva pfupi wekurara.
Iko kuseri kwemubhedha wepasi kunoitwa nefovu EVA zvinhu, inoenderana nharaunda uye haizokuvadze pasi. Kuitira kudzivirira kudonha, makona anotemwa kuita oblique kutemwa. Iyo EVA yepasi ine yekupisa yekuisa basa, iyo inogona kuvandudza kutonhorera uye kudziyisa kugona kweanofefeterwa mukamuri uye chengetedza simba nyore.
Yakakwira-mhando inochengetedza zvakatipoteredza, isina-chepfu, isingatsamwise EVA zvinhu, kristaro yakajeka zvikamu
Yakachengeteka uye inochengetedza zvakatipoteredza, yakasununguka uye yakasimba, izvo zvinhu zvakapfuura kubvumidzwa kwesangano rekuongorora rekuchengetedza
Nzvimbo dzinoshanda: zvivakwa zvemuhofisi, nzvimbo dzekutengesera, nhandare, nezvimwewo, shandisa marata-anodzora pasi mateti, ayo asingazotsva kana uchinge wasangana nemirazvo yakavhurika, uye inogona kumira tembiricha yakakwira. Kupisa kwenguva refu kunongoita kabhoniize, kudzikisira moto nekubatsira kupasa kuongororwa kwekuchengetedza moto.
Iko pamusoro pekushongedzwa kweiyo foam pasi mat iri yakajeka, izere uye yakasarudzika. Inogadzikana pasi pekuremerwa kwakanyanya. Iyo yakasimba uye yakasimba. Haizove akaremara kwenguva yakareba. Ruvara rwakarurama uye maratidziro akajeka. Ichakuunzira iwe akasiyana ekuona kunakidzwa.
Iko kuomarara kunogona kuve kwakakwira kunge makumi mashanu neshanu, uye simba iri rakanakisa. Iko kuomarara kuri kwauri, kuchikupa yako yekushushikana-isina sarudzo
Hunhu hwacho hwakakwirira zvakanyanya kupfuura zvakajairwa pasi mat. Iyo yemhando bvunzo yemurazvo-unodzora pasi mateti: isina kukodzera murazvo-unodzora pasi matawi, ane gobvu dema utsi kana uchinge wapiswa, anokwanisa murazvo-anodzora pasi mateti, aine zvishoma chena utsi, uye hunhu hwakakodzera
Isina mvura uye isinga pundike, uchishandisa lotus leaf musimboti, hapana kunwa kwemvura uye kusagadzikana, ingoichenesa nemvura kana mamvemve uye nekuipukuta
Kukwirira kwakakwirira uye kukwirira kwakanyanya, kuita kwakanaka kwekusimudzira, kuregedza kukanganisa, kudzivirira mabvi nemajoini, uye kuva asinganetseke uye kusagadzikana.
Nyore bhakera giya dhizaini, nyore kukatanura chero nguva, iyo kumucheto kweiyo giya yakashambidzika, yakachengeteka isina kutema maoko, iko kupora kwakasimba uye kwakasimba, uye nzvimbo yekutsvaira haisiye tsvina
Yedu yepasi matawi inotengeswa mukuomerera maererano nehunyanzvi hwekunze uye kuendeswa kune dzimwe nyika, senge: United States, Japan, United Kingdom, Germany, Canada, Italy, Belgium, Denmark, Netherlands, Croatia, South Korea, South Africa , zvichingoenda zvakadaro.
Pashure: Yevana gobvu rinosona furo uriri bonde rinokambaira mwana mudiki mumba mevacheche imba isiri-inotsvedza pasi Eva kudzivirirwa kwezvakatipoteredza
Zvadaro: Yevacheche EVA epurasitiki kapeti pikicha furo pasi bonde, gobvu kusona uye yakazara pasi bonde yemubhedhuru
Yoga bonde rechikadzi murume kugwinya kurovedza muviri lengthene ...
furo pasi bonde, kuputira bonde, inotonhorera Chirungu le ...
Furo kusona jimunasiyamu kurwa ...
Yevana katuni alphanumeric dambanemazwi Ma ...
Nhare yevana yekunze kwekunzwa chitima ...
Zvinowanikwa Zvigadzirwa, Sitemap, AMP Mobile Floor Furo Rakajeka, Yepasi Yekunze Exercise Mat, Floor Puzzle Mat Cushion, Floor Furo Rakajeka Mat, Floor Mat Puzzle, Floor Rakajeka, Zvese Zvigadzirwa